Suufka dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyay guddi waa wax aad u fiican kuleylka kuleylka. Waxay leedahay waxqabadka dahaarka kuleylka oo leh adeegsiyo baaxad leh.
Alaabta ceeriin ee ugu weyn ee gudiga dhogorta dhagaxa ee mashiinku sameeyay waa macdanta dabiiciga ah, iyo qadar ku habboon oo wax lagu xiro ayaa lagu daraa inta lagu guda jiro geeddi-socodka wax-soo-saarka si ay uga dhigto wax ka-hortagga kuleylka kuleylka ee is haysta. Qaybta ka-hortagga biyaha ee lagu daray waxay siinaysaa guddida dhogorta dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyay wax-qabad aan biyuhu ahayn, kaas oo ka hortagi kara gelitaanka biyaha oo hubiya waxqabadka iyo nolosha adeegga guddida dhogorta dhagaxa lafteeda. Ka dib marka la dhammeeyo guddiga dhogorta dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyo, waxaa lagu gooyaa cabbirro kala duwan mashiinka otomaatigga ah ee xawaaraha sare leh oo hoos imanaya xoogga dibadda ee kororka heerkulka iyo kordhinta cadaadiska, waxaana loo adeegsadaa shaqada dahaarka ee dhismaha.
Tilmaamo ka samaysan guddi dhogor dhagaxa ka samaysan
1. Gudiga dhogorta dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyay ayaa leh iska caabin dab oo xoog leh iyo qiimayn ilaalin dab oo Heer A ah, kaas oo ilaalin kara shaqaalaha iyo agabka dhismaha dhexdiisa haddii dab dhaco, si wax ku ool ahna uga hortago faafitaanka iyo fidinta dabka dibadda, iyo ka dhig dhismaha inuu isticmaalo Nolol iyo badbaado Wanaagsan. Guddigan dhogorta dhagaxa ah wuxuu u adkeysan karaa jawiga heerkulka sare, xitaa marka heerkulkiisu yahay 1000 darajo Celsius, ma dhalaali doono, mana keeni doono khataraha dabka.
2. Gudiga dhogorta dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyay ayaa leh wax-qabad kuleyl aad u fiican. Fiber dhogorta dhagaxa ah oo caatada ah oo jilicsan ayaa gudaha ka samaysan qaab -dhismeed adag, kaas oo si wax ku ool ah uga hortagaya is -dhaafsiga kulaylka labada dhinac ee guddiga. Ma aha oo kaliya in ay ka kooban tahay kubbadda dhoobada hooseysa, laakiin sidoo kale waxay leedahay tabinta kuleylka oo hooseeya. Sidaa darteed, marka farqiga heerkulka u dhexeeya labada dhinac ee saxanka uu weyn yahay, is -weydaarsiga kuleylku weli aad buu u yar yahay. Waxqabadka ilaalinta kulaylka ee aadka u fiican ayaa ah sababta ugu weyn ee macaamiisha u doortaan saxankan. sababta.
3. Labadan guri ka sokow, guddida dhogorta dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyey waxay leedahay hanti gaar ah oo saddexaad si looga hortago fidinta buuqa. Qaab dhismeedka fiber -ku kaliya kama hor istaagi karo faafinta kulaylka, laakiin wuxuu kaloo ka hortagi karaa gudbinta tamarta dhawaaqa. Sidaa darteed, sidoo kale waa shey aad u fiican oo nuugaya dhawaaqa iyo yaraynta buuqa, oo leh nolol adeeg dheer iyo adeegsiyo baaxad leh.
Isticmaalka guddi dhogor dhagaxa ah oo mashiinku sameeyay
Gudiga dhogorta dhagaxa ee mashiinka lagu sameeyay ayaa inta badan loo adeegsadaa warshadaha dhismaha qaarkood. Waxaa loo adeegsan karaa sidii qalab dahaar leh oogada, dibedda iyo saqafka dhismaha si looga hortago gelitaanka hawo qabow oo dibedda ah, badbaadinta tamarta iyo ilaha, si hufanna loo hubiyo qaboojinta gudaha ama shaqada kululaynta. Waxa kale oo loo adeegsan karaa warshadaha u baahan heerkulka sare, sida dahaarka korontada, maraakiibta, baabuurta, iyo tuubooyinka qaboojiyaha. Waxay leedahay codsiyo baaxad leh, oo macaamiishu waxay si xor ah u dooran karaan hadba baahidooda.
Hore: Gypsum dhagaxa dhogorta dhagaxa nadiif ah
Xiga: Mashiinka ayaa sameeyay silicate
Guddi Silicate oo Mashiin lagu Sameeyay
Gudi Qolka Nadiifinta Malabka ee Mashiinka Sameeyay
Dhogor Rock oo Mashiinka lagu Sameeyay Guddi Qol Nadiif ah
Qaboojiyaha Hawada Qolka nadiifka ah, Daaqadda Qolka nadiifka ah, Nidaamka Biyaha Qaboojiyay, Qolka Nadiifka ah, Sifaynta Unugga Hawada Cusub, Daaqadda Qolka Nadiifinta Qolka,